Martinique, St.Vincent, Barbados, Puerto Rico ary St. Croix: mpizahatany miomana ho an'i Dorian
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Martinique, St.Vincent, Barbados, Puerto Rico ary St. Croix: mpizahatany miomana ho an'i Dorian
Aogositra 27, 2019
Nampandrenesina ireo mpizahatany any Martinique, St.Vincent, Barbados, Puerto Rico, ary St. Croix, fa i Dorian, tafio-drivotra mahery vaika no ho avy. Misy vokany any amin'ny faritra ny famantaranandro sy fampitandremana, ary antenaina fa hanomboka ny talata ny toedrahona tropikaly.
Ny governoran'i Puerto Rico Wanda Vázquez Garced dia nanao sonia ny didim-panjakana izay manambara fa misy ny vonjy taitra mialoha ny Tropical Storm Dorian, Garced koa dia nanao sonia ny baiko fandefasana vidim-piainana, ao anatin'izany ny solika, mba “hisorohana ny fanaovana tombam-barotra”, hoy ny tatitra nataon'i Deibert.
Andrasana ny toetr'andro any Puerto Rico sy St. Croix amin'ny alarobia izao.
Ny fanambarana vonjy taitra dia ahafahana mampandeha ny zandarimariam-pirenena ao Puerto Rico. Mbola miady mafy amin'ny fanarenana ny tafio-drivotra Maria i Puerto Rico, ary nanambara ny fatiantoka tamin'ny taona 2017 tao anatin'ny “fikorontanan'ny fitantanam-bolan'ny governemanta lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny Etazonia.”
Nilaza ny manam-pahaizana fa ny tafio-drivotra tropikaly dia mety hanjary sokajy voalohany tamin'ny alarobia teo amin'ny faritany amerikana Puerto Rico.
San Francisco mankany Honolulu ao anatin'ny 76 andro: Ateraky ny sambo firaketana
Tsenan'ny bateria fiaramanidina: ny fironana ankehitriny manoloana ny fiaramanidina elektrika bebe kokoa